HARP – Sawbwa Coffee
Tastes And Tales
နောက်ထပ် အတွင်းမှာ မှာယူပါက အတွင်းပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
၂၀၀ဂရမ်၊ အစေ့၂၀၀ဂရမ်၊ အကြမ်းမှုန့်၂၀၀ဂရမ်၊ အနုမှုန့်၁၀၀ဂရမ်၊ အစေ့၁၀၀ဂရမ်၊ အကြမ်းမှုန့်၁၀၀ဂရမ်၊ အနုမှုန့်၅၀၀ဂရမ်၊ အစေ့၅၀၀ဂရမ်၊ အကြမ်းမှုန့်၅၀၀ဂရမ်၊ အနုမှုန့်၁ကီလိုဂရမ်၊ အစေ့၁ကီလိုဂရမ်၊ အကြမ်းမှုန့်၁ကီလိုဂရမ်၊ အနုမှုန့်
ဈေးခြင်း ထဲထည့်မယ် ထည့်သွင်းပြီး ရောင်းကုန်သွားပါပြီ ဈေးခြင်း ထဲထည့်မယ်
Artisan Blend: မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ‌အကောင်းမွန်ဆုံးသော single origin ကော်ဖီစေ့တွေကို အသုံးပြုထားတဲ့ ရာနှုန်းပြည့် မြန်မာကော်ဖီ ဖြစ်ပါတယ်။
Brewing Method: espresso machine, filter, cafetiere, and stove-top. To be enjoyed with or without milk.
ကုန်ပစ္စည်းအမျိူးအစားများ: Roasted Coffee
ရောင်းသူ: Sawbwa Coffee
Dark Roast Coffee: မြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဆုံးရှားရှားပါးပါး classic espresso ကော်ဖီ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ Specialty ကော်ဖီစေ့တွေကို ပဲ 100% အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်ပြီး အရသာ အားဖြင့် သိသိသာသာ ချောမွေ့၊ ချိုခါး တဲ့ ပုံစံမျိုး ရအောင် ဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ရှေ့ဆောင်စားသောက်ဆိုင် တွေရဲ့ နံပါတ်တစ် ရွေးချယ်စရာကော်ဖီ ဖြစ်ပါတယ်။Brewing Method: Espresso machine, filter, cafetiere, stove-top.
ဈေးခြင်း ထဲထည့်မယ် ထည့်သွင်းပြီးရောင်းကုန်သွားပါပြီ ဈေးခြင်း ထဲထည့်မယ်
Pway Na Phar
Medium Roast Coffee: မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ကော်ဖီစိုက်ပျိူးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ တိကျပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ပွေနဖာရွာမှ ကော်ဖီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြေနဖာ ကော်ဖီဟာဆိုရင် ‌အရောင်အဆင်း အားဖြင့်တောက်ပ၍ creamy ဖြစ်ပြီး ဇီးသီးနှင့်လိမ္မော်သီးကဲ့သော ခံစားမှုမျိုးကို ရရှိနိုင်မှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံးသော Dry Natural bean အနေနဲ့ 2017 မှာ Specialty Coffee Association of America ကနေပြီး ပေးအပ်ထားထားပါတယ်။Brewing Method: cafetiere, filter, stove-top.
Yay Chan Pyin
Light Roast Coffee: နိုင်ငံတကာမှ လူပြောများတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ရေချမ်းပြင် ရွာ က ကော်ဖီစေ့ တမျိူးထဲကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ကော်ဖီ ရဲ့ သိမ်‌မွေ့တဲ့ ချိုချဉ်သီး နဲ့ ပန်းလက်ဖက်‌ခြောက် ခံစားမှုရရှိ ရနိုင်ရန် အတွက် စနစ်တကျ လှော်ထားသော ကော်ဖီ‌ဖြစ်ပါတယ်။ ရေချမ်းပြင်ရဲ့ တစ်ရာသုံးဆယ့်တစ်ယောက် သော လယ်သမားများက ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ ကော်ဖီစေ့ကိုသာ အသုံးပြုထားပါတယ်။Brewing Method: Filter, cafetiere, chemex.
Sign up ပြုလုပ်ပြီးတော့ Sawbwa Coffee ရဲ့အသစ်ထွက်မည့် ကော်ဖီများ နဲ့ သတင်းတွေကို လက်ခံရယူလိုက်ပါ။
Copyright © 2022, Sawbwa Coffee. Powered by Shopify
The freshest way to drink coffee. Most recommended for those who have their own grinder.
Less extraction and more fruity. Great for Drip Coffee, V60, French press
More extraction and more body. Great for Moka pot, espresso and Myanmar style coffee
ဈေးခြင်း ထဲထည့်မယ် ထည့်သွင်းပြီးရောင်းကုန်သွားပါပြီ ကြိုတင်အော်ဒါ